Ikhishi - Thola ku-Inthanethi
Thola ku-Inthanethi Julayi 20, i-2019 Ukupheka Awekho amazwana
Kubathandi abamnandi, namuhla sizobe sifundela ukwenza ikhekhe lendabuko kube lula ukulenza. Noma ngubani onesifiso esincane sokufunda anga ...
I-Swiss chard calzone
Bathi iresiphi yaseCalzone yeChard iyinjabulo yangempela ekwindla, ngakho-ke kulezi zinsuku ithuba elihle lokusikhuthaza ukuthi sizame lobu bumnandi. ...
Ungayilungisa Kanjani Umhluzi Wezinhlanzi
Thola ku-Inthanethi May 25, 2018 Ukupheka Awekho amazwana
Nayi iresiphi yesitoko sezinhlanzi sesobho lakho, amasoseji nama-risottos. Ungalokothi usebenzise inhlanzi enamafutha (isibonelo, i-salmon, i-mackerel, i-herring noma i-sardines). Wonke umuntu ...
I-brown Rice: Izakhiwo Nezinzuzo
Irayisi elinsundu liyinkozo ephelele. Okusanhlamvu okuphelele kuqukethe amaprotheni amaningi, i-fiber, i-calcium, i-magnesium, i-Vitamin E, i-potassium ne-Photochemicals (i-compounds enempilo ngokwemvelo ekhona ezitshalweni) kune ...
I-Italian Tiramisu: Izithako nokulungiselela
Thola ku-Inthanethi May 24, 2018 Ukupheka Awekho amazwana
I-tiramisu yase-Italy iyi-dessert yasekuqaleni enokunambitheka okumnandi kwe-Italy, sincoma le ndlela yokupheka ye-tiramisu enomnandi nokuthungwa okubushelelezi. Nge-tiramisu yangempela, ...
Ama-Enchiladas Ungadliwa: Izithako nokulungiselela
Thola ku-Inthanethi Okthoba 24, 2017 Ukupheka Awekho amazwana
Yini i-Enchilada? I-enchilada yisitsha okuvela kuyo ukudla kwaseMexico, okwenziwe nge-cruilla yommbila, esetshenziswayo ...
I-classic tiramisu ngezinyathelo ze-5
Thola ku-Inthanethi Okthoba 17, 2017 Ukupheka Awekho amazwana
I-Tiramisu ingelinye lama-dessert anconywa yibo bonke. Singayihambisa nge inkomishi yekhofi noma singayihambisela noma ikuphi ukumukelwa, njengakwamanye amatafula amahle futhi ...
Ungayilungisa Kanjani Isaladi Lamango
Thola ku-Inthanethi Disemba 6, 2016 Ukupheka Awekho amazwana
Uma ukhathele ukudla amasaladi endabuko, yisikhathi sokuzama abanye. Futhi kungani kungenasaladi lomango eligcwele ukunambitheka nombala. ...
Ungayilungisa Kanjani I-Imperial Cuban Rice
Thola ku-Inthanethi Septemba 29, 2015 Ukupheka Awekho amazwana
Iresiphi ye-Imperial irayisi ayikhonzwa futhi ilungiselelwe emakhaya aseCuba kaningi njengelayisi yenkukhu yeklasikhi, kodwa isaqhubeka…
Imishwana engama-20 yokudala yesimo se-WhatsApp
Ungawina kanjani njalo kuClash Royale